Indonesia in Focus: Qof kasta oo Banii'aadan ah waa in aan marnaba dembaabay, bertaubatlah (dambidhaafna waydiista).
Qof kasta oo Banii'aadan ah waa in aan marnaba dembaabay, bertaubatlah (dambidhaafna waydiista).
Kortaan ayaa waxaa ma uusan dhammayn (342)
(Qaybta saddex boqol iyo laba iyo afartan), Depok, West Java, Indonnesia, August 12, 2015, 3:34 pm).
Nabiga yiri, qof kasta oo Banii'aadan (ilmo Aadam) waa in ay dembaabeen, haddii Nebi iyo Rasuul, maxaa yeelay, Anbiyadii iyo Rusushii waa la isku hallayn karo (in ay dhacdo Ilaah dembiga).
Si kastaba ha ahaatee, waa naxariis iyo raxmad, Ruux kasta oo Addoon uu dembaabay, haddii uu Toobad keena (dambidhaafna waydiista) in ka badan dhammaan falalka kuwa sinaysta (dembiga), ka dibna, dembiyadayadii oo dhan waa laga cafiyi doonaa Ilaah iyo dembiga oo la soo dhaafay waxaa lagu beddeli doonaa Ilaah wanaagga, haddii uu dib on Ilaah socda si joogto ah tiirarka Islaamka, daacad ah iyo khusu iyo samir ay ku samayn karaan.
Man ma aha lacag la'aan ah ka qaladaad, oo yaryar iyo waaweynba, oo og ama ula kac aheyn. Waxaa intaa dheer, haddii si damaca naftiisa xukumaan. Oo wuxuu ahaan doonaa caasinimada baadkiisa qabanayaan. Daacadnimo, sida haddii waxba ma lahayn qiimaha weyn.
In kasta oo ay ragaadisay caasinimada aadanaha iyo dembiga ku ururto, taas macnaheedu ma waxaa jiray albaabka lahayn si loo hagaajiyo. Sababtoo ah, si kastaba ha ahaatee kordhaya sinaysta camal anoo addoonkaaga ah, laakiin albaabka naxariis mar walba waa uu furan yahay. Aadanuhu waxa la siiyaa fursad ay isku hagaajiyo. Taasi waa, la Toobadda falalka in ay samatabbixin karaan in ay qarka u Jahannamo. Repentance la sameeyaa waa in guud ahaan, oo waxaa loo yaqaan toobad NASHUHA. Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
Waxaan lahaa addoommo Ilaah, dembi ma aydin, Hubaal Ilaah waa u abuuri doonaa Khalqi kale, kii ka dibna u Dambi dhaafa. 
Iyada oo aan toobadkeen, waxaan qalbiyadeenna laga Xumaan in nijaasayn daahiriyo aawadeed karin. Waayo, dembigu ee desecrating beerka, iyo waxa daahirka ah waa waajib ku ah. Nabiga sallallaahu 'wa yiri: Runtii Mu'min ah marka dembiga, waxa ay noqon doontaa (timi) hal dhibic si tartib ah oo madow on qalbigiisa. Haddii ayuu isqoomameeyey, ka tagay (ficilka) oo ka baryay dambi dhaaf (Eebe), ka dibna uu ku soo laabtay nadiif ah. Laakiin markii kordhaya (dembiga), ka dibna bertambahlah Xumaan madow ilaa iyo inta uu qalbigiisa ka buuxsamay. Haddaba bal maxaad u raan ar (wadnaha iyo dedkeeda) in lagu Xusi, Ilaah eraygiisa "Dhab ahaantii ma (noqon), run ahaantii waxa ay had iyo jeer isku day inaad u dhow Quluubtooda. [Al Muthaffifin: 14] 
Ilaah ayaa sidoo kale noo dhiiri in ay toobad keenaan oo beristighfar degdeg ah, sababtoo ah waxa ay wax badan ka wanaagsan yahay L. in dembiga. Ayaa sheegay in Eebe.
Markaas hadday toobadkeenaan, waxaa Khayr u tahay, iyo hadday jeedsadaan, Eebe cadaabi cadaab daran adduun iyo aakhiraba, oo aysan waligood ka (sidoo kale) mid caawisa oo ku ilaaliya oo aan dhulka. [At Tawbah: 74]
Nabiga naftiisa ayaa tusaale in ka qoomameeyey this. Waxa uu sallallaahu 'wa badan ka qoomamooday iyo beristighfar, ilaa xad in saaxiibo ku tirinay by jeer ka badan boqol ee Majliska ah, sida Nafi' Ibn Cumar Maula ayaa sheegay:
Ibn Cumar loo isticmaalaa in lagu xisaabiyo (istighfar reading) n ee Majliska ah Nabiga kacay waxa ka jeer boqol ka hor, (kaas oo sheegay): Haa Rabbku, ee ii Dambi Dhaaf iyo aqbalo taubatku. Runtii, waxaad tahay qaata Sare toobadda, Dhaafe Naxariista. 
Toobadda FAHMIDA NASHUHA
Maxaa loola jeedaa in toobaddii NASHUHA, waa soo celinta addoon u Ilaah dembi abid ka go'an, si ula kac ah ama ay sabab u tahay Jaahil ah, si ay u noqoto qof daacad ah, daacad ah, oo xoog leh oo ay taageerayaan gacma addeecidda-addeecidda addoon gaaraan meel ka mid ah hayaasha Ilaah oo Muttaqin (taxadar leh) iyo (addeecsan) kaas oo noqon kara ilaaliya Ibliiska isaga qudhiisa.
Sharciga toobad NASHUHA waa Fard 'Cayn (waajib ku ah qof kasta) korkiisa kasta oo Muslim ah. Caddeymaha ay:
Markaasuu bertaubatlah in Ilaah, Mu'miniinta O inaad Liibaantaane. [An Nuur: 31].
2. Erayga Nabiga sallallaahu 'wa.
Muslimiinta ayaa sidoo kale ku heshiiyay waajib toobadda, sida Imam Al-Qurtubi yiri: "(Culimada) dadku waxay leeyihiin ijma '(heshiin) in sharciga toobadda la Fard (qasab) Mu'miniinta oo dhan" . Sidaas darteed Ibn Qudamah kale oo uu dhigayaa .
Ballaadhkiisuna nimcada Ilaah iyo wanaaggiisa toobad NASHUHA
Man welwelin haddii toobad aan lagu aqbalin, maxaa yeelay, waa nimcada Ilaah ee waa mid aad u ballaaran, sida Salaadda oo ka mid ah Malaa'igta tilmaamay doorka in Kalimadiisii:
Eebow, nimcada iyo aqoonta aad ka mid ah wax walba, ku siiyo dambi dhaaf in kuwa toobadkeena ee raaca jidkaaga, iyo lehe Cadaabka Jahannamo dab ah. [Al-Mu'min: 7].
Si loo aqbalo NASHUHA toobadda Alle Subhanahu wa Jannatul, waxaa jira shuruudo dhawr ah oo ay tahay in ay dhammaystirmaan,
Iyo in toobaddii aan lagu aqbalin Ilaah kuwii shar sameeya (oo) ilaa Markuu u Yimaaddo Midkood (markaas) wuxuu yidhi "Runtii waxaan Toobad keeni hadda". Oo aanay (sidoo kale aqbalay toobad) dadka dhintey ay ahaayeen kuwii Gaalnimo. Dadka in ay leeyihiin Waxaan ku siin Cadaab daran. [An-Nisa ': 18].
Repentance la aqbalo Shareecada Islaamka, oo waa la dhisay kuwa daacadda ah oo kaliya. Taubat sababta oo ah ujeedooyin riya` ama adduun, ma aha sida tii syar'i toobad yiri. Ayaa sheegay in Eebe.
Kuwa toobadkeena ee wanaajiya iyo maalin walbo (Diinta) Eebe iyo daacad ah (sameey) Diintooda Eebe mooyee. Markaas waxay si wadajir ah oo maalin maalmaha ka mid yihiin kuwa rumeeyey Ilaah siin doonaa kuwa rumeeyey xaqa ah ajir wayn. [An-Nisa ': 146].
3. Garashada inuu dembigiisa.
Towbad keenku maaha wax sax ah, marka laga reebo dib markii dembiga og iyo galiyo qalad ah, oo rajo ka badbaaday cawaaqib xun falalka caynkaas ah.
Repentance kaliya la aqbali karin oo la tibaaxaha qoto dheer kuwo Qoomameeya. Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
5. tegida caasinnimada iyo soo celinta xuquuqda milkiilayaasha ay.
Kuwa Toobad keena dembiyadooda la go'an fasax khasab ah oo ku soo celi wixii xuquuq ah mulkiilaha, haddii foomka hantida ama wixii la mid ah. Haddii qaab aflagaado ama la mid ah lagu eedeeyay, ka dibna by hab oo raaligelin. Haddii qaab xan (WAG), ka dibna jidkii baryay waa la ogol yahay (dulqaadan) ilaa iyo inta codsiga sida ma keeno saamayn kale loo kasin. Haa haddii ay tahay saamaynta qabriga, waa ku filan tahay si ay u tukadaan isaga si uu u gaadho wanaag ah.
6. Muddada toobadda hor neefta ahaa ee hunguriga (dhimasho qarka u saaran) iyo ka hor inta qorraxdu soo baxdana ee galbeedka.
Nabiga sallallaahu 'wa ayaa sharxay in erayada uu sallallaahu' wa:
Dhab ahaan yaa Eebe ka aqbalo Toobadda anoo addoonkaaga ah ka hor inta uu neefsashada ahaa ee hunguriga .
Hijrah aan la kala gooyey ilaa joojinta (waqti) toobadda, iyo in toobaddii aan la kala gooyey ilaa ay qorraxdu ka soo baxdo xagga galbeed .
7. Istiqamah ka dib markii toobad keenin.
Markaas aad sii waddo sax ah, sida amray, iyo (sidoo kale) kuwa la joogay aad toobad hana ku xadgudbina xadka. Indeed, Eebana waa arkaa waxaad camal falaysaan. [Huud: 112].
Haddii kuwa Rumeeyey Aayaadkanaga idiin yimid, markaas uu ku odhan, 'Peace-Calaykum, Eebahaa ayaa wuxuu ku kor naxariis, (kuwaas) in ku alla kii idinku dhex jira oo danbi ah oo jaahilnimada, dabadeedna wuu ka toobad ka dib markii ay samaynayaan oo wanaajiya, Eebana waa dambi dhaafe Naxariista. [Al An'am, 54].
XUSUUSNOW MARKA toobad
1. Aamin in Eebana waa Oge All-arkaya. Ilaah wuxuu og yahay oo dhan qarsoon oo qarinaayay ee wadnaha. Inkasta oo aanu mana arkin, laakiin waxa uu ku khasbanaaday in uu ku aragnay.
2. Eeg in aad nuxurka durhaai haybad, iyo ma arkaan size ee shayga kuwa sinaysta, sida uu hadalka.
3. Xusuusnow, dembigiisii uu yahay oo dhan xun iyo sharka ah, waayo, isagu waa uu caqabad ku yahay farxad gaaro Adduun iyo Aakhiro.
4. laga tago caasinnimada meelaha iyo saaxiibada kuwaas oo si xun u dhaqmaan, kuwaas oo loo isticmaalo in lagu caawiyo isaga dembaabtaan, oo waxay ka gooyeen xiriirka iyaga la inta ay aan beddelmi wanaagsan.
WAXYAABAHA Block toobad
Waxaa ka mid ah waxyaalaha looga hortago dembigu waa:
1. Bidcada Diinta. Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
Dhab ahaan yaa Eebe xirmin toobad oo dhan xagjirka ahayn. [Ash-Shahihah No. 1620]
2. qabatinka in khamriga. Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
Ku alla kii khamri la cabbo (khamriga), ka dibna uu salaadda aan lagu aqbalin afartan habeen. Haddii uu toobad, Ilaah waa ka aqbalayaa. Si kastaba ha ahaatee, marka lagu celceliyo, waxaa haboon marka Ilaah isaga siiyey cabniin ah oo laga bilaabo webiga Khibaal. Dadka qaar waxa ay weydiinaya:. "? Waa maxay Khibaal webiga" Waxa uu ku jawaabay, "Malax degan jahannamada 
Sidaas darteed khuseeya kooban oo ku saabsan toobad NASHUHA. Waxaan rajeynayaa in uu noqon karaa mid waano ah in had iyo jeer toobad keena Eebe Subhanahu wa Jannatul.